Tom Howard - Ku kobc meheraddaada Xashiishadda Qareenkayada Xashiishadda Cannabis
Ku saabsan Tom - Garyaqaanka ugu Fiican Warshadaha Cannabis
Ruqsad la siiyay sanadkii 2008
Muwaadin u dhashay Peoria, Illinois, Thomas Howard waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Illinois Wesleyan University iyo Marquette University Law School.
Inta hawshiisa uu socday, wuxuu helay abaalmarino badan oo milyan oo doollar ah, wuxuu fuliyay xukunno, wuxuuna sugay xuquuqdii macmiilkiisa isagoo kala taliyay sidii loo dhimi lahaa waqtiga iyo kharashaadka ku yimid hirgelinta heshiisyada iyada oo loo marayo dacwadda.
Wuxuu ka shaqeeyaa Bangiga Ganacsiga, Socdaalka iyo Xashiishadda Qaybta Gobolka Illinois waxaana lagu abaalmariyay labadaba Rising Star by Super Qareennada iyo inuu yahay Qareen soo baxaya oo Hogaamiyayasha Qareenada ilaa iyo sanadii 2015.
Inta uu ku jiray hawshiisa, wuxuu ahaa nin ganacsade ah oo diirada saaray abuurida qiimaha.
Sannadkii 2013, Tom wuxuu rabay inuu dadka ku abaalmariyo iibsashada a sheeko uu qorey sanadkii 2010 Shuruucda marijuanaanka oo ay la yimaadeen fikrad ku saabsan codsi u doodid siyaasadeed. Isaga iyo maalgaliye ayaa sameeyay LLC waxayna dhiseen barnaamijka u doodista siyaasadeed, Baaqyada
Wuxuu bilaabay inuu barto naftiisa codeynta iyo sida softiweerka iyo internetku u shaqeeyaan. Wuxuu la shaqeeyay oo uu la shaqeeyey kooxo ku kala baahsan adduunka oo dhan, isagoo samaynaya shabakad soo saareyaasha kalsoonida leh oo uu ku tiirsanaan karo naqshadeeye iyo injineernimada xalka software-ka oo idil, marka lagu daro suuqgeynta aad iyo aad u muhiim u ah dhammaan qaybaha ganacsiga ee leh joogitaanka khadka tooska ah.
Ka dib markii uu doorbiday oo uu barto barnaamijka softiweerka iyo ganacsiga shabakada dhowr sano, Tom Howard wuxuu abuuray shirkad farsamo oo la yiraahdo Stumari si ay uga caawiso qaabeynta waxyaabaha, sida boggan, iyo barnaamijyo kale oo la dhiso.
Guga 2016, Tom Howard wuxuu rabay inuu ku bilaabo adeegsiga aqoontiisa kombiyuutar ee ku saabsan howlihiisa sharciyeed. Codsiga fiisaha H-1B wuxuu soo dul maray miiskiisa oo wuu ogaa in lagu codeyn karo sababta oo ah nooca xogta iyo mugga codsiyada u baahan jaangooyooyinka.
Wuxuu sameeyay xoogaa cilmi baaris ah si loo ogaado baaxadda suuqa iyo baahida loo qabo xalka ku saleysan webka si loo muujiyo hanaanka ganacsiyada ay wajahayaan markii ay iskudayayaan inay shaqaaleeyaan kartida xirfadeed ee ugu fiican adduunka.
Iyadoo xogtii gacanta ku haysa, Tom Howard wuxuu dib ugu laabtay kooxihii uu ka dhisay Stumari wuxuuna bilaabay inuu qaabeysto xalka cusub ee arrimaha soogalootiga. Kaliya maahan in fiisooyinku waafaqaan u rogista xeerarka ka socda Adeegyada Kastamyada iyo Socdaalka iyo Madaxweynaha hadda jira, laakiin markaa xaaladda fiisaha waa in lagu maareeyaa si had iyo jeer loo hoggaansamo.
Horumarku wuxuu sii socdaa ilaa maantadan oo wuxuu ka caawiyaa dadka inay ka dhabeeyaan riyooyinkooda Mareykanka.
Booqo Fiisooyinka Shaqada
Qareenka Wershadaha Cannabis
Intii lagu jiray waqtigiisa firaaqada ah dhowrkiisii ​​sano ee ugu horreeyay ee barashada sharciga, Tom Howard wuxuu cilmi baaris ku sameeyay taariikhda iyo sharciga kiiska ee ku saabsan ansaxnimada shuruucda marijuana ee qaranka. Wuxuu daabacay sheeko cusub oo ka dhalatay cilmi baarista uu sameeyay magaciisa la yiraahdo Hoam Rogh. Sidii uu hore u daabacay laba buug oo kale oo isagu wakhtigiisii ​​firaaqada ahaa ku qoray dugsiga sharciga.
Laga soo bilaabo halkaas, Tom Howard wuxuu ku ballaariyay cilmi-baarista meelaha cakiran ee sharciga federaalka wuxuuna bilaabay daabacaadda iyo kahadalka arrimo kala duwan oo la xiriira soosaarka xashiishadda soo ifbaxda. Qareen ahaan magaalada Peoria, Illinois, ku dhaqankiisa xashiishad ayaa xaddidan illaa 2018, markii uu bilaabay kanaal YouTube ka ah gobolkuna wuxuu bilaabay socodsiinta sharci ahaanta Adeegsiga Dadka Waaweyn.
Waxaad wali ka heli kartaa nuqul buugga uu qoray, laakiin laguugu daabacay cinwaan aan yarayn, oo ku yaal Amazon.
Saldhigga Wadajirka ah
Marka la gaaro 2018, Tom Howard wuxuu sameeyay wax ka badan 100 saami oo iibsi guryo ah wuxuuna arkay maxkamad ku filan oo ku filan in lagu aqoonsado qaababka si aad ah u qoto dheer.
Wuxuu sidoo kale ku sii jeeday isbedellada dhinaca sharciga wuxuuna bilaabay inuu arko isku-dhafnaantiisa farsamooyinka teknolojiyada iyo xirfadaha bangiga.
Sidaas darteed, wuxuu bilaabay Saldhigga 'Isbahaysiga' oo loo adeegsado kaydiyaasha ganacsiga iyo inuu muujiyo muuqaalka kore ee muuqaalka kore ee sharciga macaamil ganacsi ee sugan iyo sharciga hay'adaha hay'adaha maaliyadeed.
Tom Howard wuxuu isku dhex daraa softiweerkiisa iyo xirfadiisa sharciyeed si uu u bixiyo ajuuro siman oo loogu talagalay dacwada bangiga ganacsiga, iyo u isticmaal xogta barbaradka si ay usii wadaan dib uqabsashada iyo nadiifinta adeegga la siinayo macaamiishooda bangiga bulshada.
Qareenka Cannabis ee warbaahinta bulshada
Tom Howard si firfircoon ayuu u baadhay oo u adeegay baahida sharciyeed ee warshadaha cannabis laga soo bilaabo 2010. Wuxuu si joogto ah u daabacay arrimo kala duwan oo ay warshadu wajahayso wuxuuna wakiil ka ahaa hay'adaha dhaqaalaha iyo xashiishadda ee warshadaha cusub iyo kuwa adag. Sanadka 2018, Tom Howard wuxuu bilaabay a YouTube Channel waxayna bilaabeen websaydhkan inuu ballaariyo awoodiisa ku xirnaanta iyo u adeegida warshadaha cannabis.